UYesu Usifundisa Indlela Yokuthandaza—Nabantwana!
NGABA uyathetha noYehova uThixo?— Uyafuna ukuba uthethe naye. Xa uthetha noThixo, oko kuthiwa kukuthandaza. UYesu wayesoloko ethetha noYise wasezulwini. Maxa wambi wayefuna ukuba yedwa xa ethetha noThixo. IBhayibhile isixelela ukuba, ngesinye isihlandlo, “Wenyuka waya entabeni yedwa ukuze athandaze. Kwahlwa eyedwa khona apho.”​—Mateyu 14:23.
Yiyiphi indawo onokuya kuyo ukuze ube wedwa xa uthandaza kuYehova?— Mhlawumbi unokuba wedwa ukuze uthethe noYehova ngaphambi kokuba uye kulala ebusuku. UYesu wathi: “Xa uthandaza, ngena egumbini lakho langasese uze, wakuba uluvalile ucango lwakho, uthandaze kuYihlo.” (Mateyu 6:6) Ngaba uyathandaza kuYehova busuku ngabunye ngaphambi kokuba ulale?— Ufanele wenjenjalo.
UYesu wathandaza xa wayeyedwa . . . naxa wayekunye nabanye
UYesu wayethandaza kwanaxa ekunye nabanye abantu. Xa umhlobo wakhe uLazaro wafayo, uYesu wathandaza ekunye nabanye kwindawo awayebekwe kuyo uLazaro. (Yohane 11:41, 42) Kwakhona uYesu wayethandaza xa ehlanganisene nabafundi bakhe. Ngaba uyaya kwiintlanganiso ekuthandazwayo kuzo?— Apho kudla ngokubakho umntu okhulileyo othandazayo. Kuphulaphule ngenyameko oko akutshoyo kuba uthandazela wena kuThixo. Ngoko uya kukwazi ukuthi “Amen” ekupheleni kwaloo mthandazo. Ngaba uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuthi “Amen” ekupheleni komthandazo?— Kuthetha ukuba uyawuthanda loo mthandazo, yaye uyavumelana nawo.
Kutheni ufanele uphulaphule ngenyameko xa kuthandazwa ezintlanganisweni?
Kwakhona uYesu wayethandaza xa eza kutya. Wayembulela uYehova ngokutya kwakhe. Ngaba nawe uyathandaza ngaphambi kokuba utye?— Sifanele simbulele uYehova ngokutya asipha kona ngaphambi kokuba sitye. Omnye usenokuthandaza xa nisitya nibaninzi. Kodwa kuthekani ukuba utya wedwa? Okanye kuthekani ukuba utya nabantu abangambuleliyo uYehova?— Ngoko ufanele uzithandazele.
Ngaba kufuneka usoloko uthandaza ngokuvakalayo? Okanye ngaba uYehova angakuva xa uthandaza entliziyweni?— Impendulo sinokuyifumana koko kwenzeka kuNehemiya. Wayengumnquli kaYehova owayesebenza kwibhotwe likaKumkani uArtashashta wasePersi. Ngenye imini uNehemiya waba buhlungu gqitha ngenxa yokuba weva ukuba iindonga zesixeko sakowabo iYerusalem, zazidilikile.
Unokuthandaza nini entliziyweni, njengoko wenzayo uNehemiya?
Xa uNehemiya wabuzwayo ngukumkani ngesizathu sokuba abe buhlungu, waqala wathandaza entliziyweni. Emva koko uNehemiya wamxelela ukumkani isizathu sokuba abe buhlungu waza wacela imvume yokuya eYerusalem ukuze azakhe kwakhona ezo ndonga. Yintoni eyenzekayo?—
Ewe, uThixo wawuphendula umthandazo kaNehemiya. Ukumkani wamvumela ukuba aye! Yaye ukumkani wamnika uNehemiya imithi emininzi yokwakha iindonga. Ngoko oku kubonisa ukuba uThixo unokuyiphendula imithandazo yethu, nokuba sithandaza entliziyweni.​—Nehemiya 1:2, 3; 2:4-8.
Ngoku makhe ndikubuze. Ngaba ufanele uthobe intloko xa uthandaza? Ngaba ufanele uguqe ngamadolo? Ucinga ntoni?— Maxa wambi uYesu wayeguqa ngamadolo xa ethandaza. Ngamanye amaxesha wayesima ngeenyawo. Yaye ngezinye izihlandlo wayephakamisa intloko yakhe ajonge ezulwini xa ethandaza, njengoko wenzayo xa wayethandazela uLazaro.
Ngoko, kubonisa ntoni oku?— Ewe, kubonisa ukuba ayibalulekanga indlela oma ngayo. Maxa wambi kufanelekile ukuthoba intloko nokucimela. Ngamanye amaxesha usenokufuna ukuguqa ngamadolo, njengokuba wenzayo uYesu. Kodwa khumbula ukuba, sinokuthandaza kuThixo nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku, yaye uya kusiva. Kubalulekile ukuba xa sithandaza sikholelwe ngokwenene ukuba uYehova uphulaphule. Ngaba uyakholelwa ukuba uYehova uyayiva imithandazo yakho?—
Ziziphi izinto onokuthetha ngazo noThixo emthandazweni?
Sifanele sithini xa sithandaza kuYehova?— Khawutsho: Xa uthandaza, ziintoni othetha ngazo noThixo?— UYehova usinika izinto ezininzi kakhulu yaye simele simbulele ngazo, akunjalo?— Sinokumbulela ngokutya esikutyayo. Kodwa ngaba wakha wambulela ngesibhakabhaka, imithi eluhlaza neentyatyambo ezintle?— Nazo zenziwa nguye.
Ngesinye isihlandlo abafundi bakaYesu bamcela ukuba abafundise indlela yokuthandaza. Ngoko uMfundisi Omkhulu wabafundisa, yaye wabaxelela izinto ezibalulekileyo ababemele bazithandazele. Ngaba uyazazi ezo zinto?— Thatha iBhayibhile yakho uze utyhile kuMateyu isahluko 6. Kwindinyana 9 ukusa kweye-13, sifumana oko abantu abaninzi bakubiza ngokuba nguBawo Wethu Osezulwini okanye uMthandazo weNkosi. Masiwufunde kunye.
Apha sifunda ukuba uYesu wasixelela ukuba sithandazele igama likaThixo. Wathi sifanele sithandazele ukuba igama likaThixo lingcwaliswe, okanye liphathwe njengelingcwele. Ngubani igama likaThixo?— Ewe, nguYehova, yaye simele silithande elo gama.
Okwesibini, uYesu wasifundisa ukuba sithandazele ukuba bufike uBukumkani bukaThixo. Obu Bukumkani bubalulekile kuba buza kuzisa uxolo emhlabeni buze buwenze ube yiparadesi.
Okwesithathu, uMfundisi Omkhulu wathi sifanele sithandazele ukuba ukuthanda kukaThixo kwenziwe emhlabeni kanye njengokuba kusenziwa ezulwini. Ngoko ke, ukuba sithandazela oku, sifanele senze oko uThixo akufunayo.
Emva koko, uYesu wasifundisa ukuba sithandazele ukutya kwemihla ngemihla. Kwakhona wathi sifanele sicele ukuba uThixo asixolele xa senze izinto eziphosakeleyo. Kodwa ngaphambi kokuba enze oko, simele sibaxolele abanye xa benze izinto eziphosakeleyo kuthi. Ngaba kulula kuwe ukwenza oko?—
Ekugqibeleni, uYesu wathi sifanele sithandazele ukuba uYehova uThixo asikhusele kulowo ungendawo, uSathana uMtyholi. Ngoko zonke ezi zizinto esifanele sizithandazele kuThixo.
Sifanele sikholelwe ukuba uYehova uyayiva imithandazo yethu. Ukongezelela ekumceleni ukuba asincede, sifanele siqhubeke simbulela. Uyavuya xa sinyanisekile emthandazweni naxa sicela izinto ezifanelekileyo kuye. Yaye uya kusinika ezo zinto. Ngaba uyakukholelwa oko?—
Amacebiso angakumbi ngokuphathelele umthandazo afumaneka kweyabaseRoma 12:12; kweyoku-1 kaPetros 3:12 nakweyoku-1 kaYohane 5:14.
Hlala Uthandazela Umoya Oyingcwele
Lo mdlalo unceda abantwana abaneminyaka ephakathi kweyi-6 neyi-8 bafunde ukubaluleka kokuhlala bethandaza.
UYehova Uphendula Imithandazo Engqalileyo
Abantwana abana-6 ukuya kutsho kwabana-8 baza kukuvuyela ukudlala umdlalo obafundisa ngokubaluleka komthandazo.
Nceda Uve Umthandazo Wam (Ingoma 56)